तीन तोला सुन, एक कठ्ठा जमिनमा प्रचण्डको मितव्ययी जीवन शैली | ImageKhabar <!-instant articles-->
तीन तोला सुन, एक कठ्ठा जमिनमा प्रचण्डको मितव्ययी जीवन शैली
बिहीबार, १६ साउन, २०७६
राजसी ठाँट, तडक भडक भएका अत्यन्तै खर्चिलो जीवन शैली बाँच्ने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सम्पत्तिको नाममा जम्मा तीन तोला सुन र एक कठ्ठा जग्गा मात्रै भएका निर्धन नेता हुन । तीन तीन पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका हाल सत्ताधारी दलको अध्यक्ष र क्रान्तिकारी ब्यक्तिव प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्रममा देखाएको सम्पत्ति विवरण यति मात्रै हो जसलाई विभिन्न समाचार माध्यमले प्रकाशित र प्रशारित गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वमा नै पछिल्लो समयमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पछि निर्धन र गरिब प्रधानमन्त्रीको चिनारी र परिचय बनाएका सुशील कोइराला हुन । कोइराला निर्धन र गरिब भए पनि यिनको सामान्य जीवनयापनको शैली र सरलता सबैले नजिक बसेर देखेको सत्य हो यद्यपि कोइराला समेत यदाकदा केही लाख नगद आफ्नो निवासबाट हराएको कारण विवादमा परेका थिए । निर्धन प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही लाख हराएको विषयलाई लिएर अनेकन कोणबाट प्रश्नहरु उठे र कोइरालाको सादगी जिन्दगीमा औंला तेर्स्याइयो । विभिन्न लान्छना र आरोपले महिमा मण्डन पनि गरियो ।
राजनीतिमा जतिसुकै विवाद र कमसल नेताको रूपमा चित्रित गरिए पनि सुशीलको सामान्य जीवन यापन शैलीको विपक्षी राजनितिक नेताकार्यकर्ता पनि प्रसंशा गर्थे । देशलाई गुण नै लगाउन नसके पनि बैगुन चै नगर्ने मान्छे, लाभ दिन नसके पनि हानी चै नगर्ने मान्छेको अर्थमा निर्धन सुशील कोइराला परिचित थिए । सुशीलको प्रधानमन्त्रीत्व पनि संविधान जारी गर्नुको जस भन्दा पर केही रहेन भएन । तथापि काङ्ग्रेसहरु उनको पालामा संविधान आउनुलाई नै महत्त्वपूर्ण र महान उपलब्धि मान्छ्न ।
आजको चर्चा राजनीतिक उपलब्धिको नभएर नेताको सार्वजनिक छवि र सम्पत्ति मोहको हो । सार्वजनिक मान्छेको निजी जिन्दगी कम र सार्वजनिक जिन्दगी धेरै हुनाले हरेक सार्वजनिक मान्छेको निजी मामला र जीवन सार्वजनिक चियो र चासोको प्रसङ्ग हरपल बनिरहेको हुन्छ । झन भ्रस्टाचार जस्तो अर्बुद रोगले ग्रस्त हाम्रो जस्तो देशमा मान्छेहरुको सम्पत्ति कमाइ र रहनसहन चाल चलनमा आएको परिवर्तनले यस प्रतिको चासो चर्चा झन प्रवल र सबैको चियोको विषय बन्न जान्छ । चुचुरोमा नै पुगेको हुन्छ निन्दा र प्रसंसा ।
प्रचण्ड पनि यस कारण सधैं चर्चाको पात्र बनेका छन कि यिनको सार्वजनिक जीवन अत्यन्तै भडकिलो र खर्चालु छ । यिनको हातको घडी देखि सुत्ने पलङ अनि सधैं फेरिरहने सुटको बारेमा कयौं अडकलबाजि र तथ्यहरु बाहिरिएका छन । हरेक पटकको निजी विदेश भ्रमण होस या औपचारिक राज्यको कार्यकारी र कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको हैसियतमा भएका भ्रमण । पटकपटक धेरै पटक प्रचण्ड भ्रमण सधैं खर्चिलो र देशलाई नै बोझ पर्ने आर्थिक विवरण बाहिरिन्छ । स्वदेशमै पनि विभिन्न महंगो रिसोर्ट प्रचण्ड रोजाइमा पर्ने गर्छ । प्रायः हिजो कसैले औंला उठाउन सक्ने परिस्थिति नहुँदा राजाको प्रत्यक्ष निगरानीमा शासन ब्यबस्था चल्दा अझ भनौं पन्चायती ब्यबस्थाको निरंकुशता हुँदा पनि राजाहरू, राजपरिवारका सदस्यहरुको यति भड्किलो र खर्चालु दिनचर्या हुँदैनथ्यो जति अहिलेका नेताहरूको छ अझ झन विशेष प्रचण्डको छ ।
एउटा सर्वहारा नेताको जिन्दगीको शैली र राजामहाराजाको शैलीमा ठूलो भिन्नता र फराकिलो अन्तर रहन्छ जुन स्वभावतः अन्यथा हैन तर यहाँनेर विल्कुल फरक दृश्य देखिन्छ । राजाहरू कम खर्चालु, मितव्ययी र कम्जुस तर जनताका प्रतिनिधि, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई आफ्नो आदर्श र दर्शन सम्झने कम्युनिस्ट नेताहरू ऎयासी सामन्ती प्रथा र ब्यबस्थाका नायक झै प्रतीत भएको छ । आदर्श र व्यबहार बिचको तालमेल अलिकति कहिंकतै र कहिलेकाही पनि मेल नखाने जीवन चरित्र प्रचण्ड कमरेडमा देखिन्छ जुन कम्युनिस्ट आचरण, विचार र दर्शनको खिलाफमा छ । तनाव न्यूनीकरणको बहाना होस या पार्टीको दस्तावेज लेखन प्रचण्ड रोजाइमा पर्छन् देशका ठूला ठूला र महंगा रिसोर्टहरु । आखिर रिसोर्टहरुले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा नराखी या भोलि कुनै पनि बहाना र मुल्यमा क्षतिपूर्ति लिइहाल्छ्न ।
पार्टीको दस्ताबेज लेखनमा समेत रिसोर्ट पुग्ने प्रचण्डपथ गज्जब कम्युनिस्ट आचरण भनेर तत्कालीन एमाले नेताहरू व्यंग्य गर्थे । गरिबको लागि, जनताको लागि लेखिने राजनीतिक दस्तावेज पूँजीवादी सान र शैलीले कसका लागि लेखिन्छ ? रिसोर्टको बसाइ र खुवाइ पियाइबाट रक्सी सेवन गर्ने प्रचण्ड बानीले आजित भएर एकपटक कमरेड माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा नै उनको रक्सी खाने स्वभाव र शैलीलाई सडकमा बर्बराउने मातेको मान्छेको भाषणकै हाराहारीमा भनेर निम्न स्तरको भाषामा खिस्टयाएका थिए ।
प्रचण्ड नाममा कम्युनिस्ट हुन तर उनको आचरण व्यबहार र शैली पुजीवादी सामन्तवादी चरित्रलाई माथ गर्ने खालको छ । जसलाई उनका विपक्षी आलोचकहरुले होइन सत्तामा बस्ने आफ्नै नेताकार्यकर्ताले स्वीकार गरेका र केहीले विभिन्न माध्यमबाट आलोचना गरेका पनि छन । सम्पत्ति र धनार्जनको विषयलाई लिएर तत्कालीन माओवादीभित्र भयंकर मतभेद आलोचना र निन्दा भएको कारण अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग पनि बनेको थियो तर प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएन । लहरो, पहरो सबै मुछिने र सबै थर्कने पार्टी नै भताभुङ बन्ने स्थितिको कारण सो प्रतिवेदन तैचुप मैचुप बनाउने अस्त्र बन्यो । आर्थिक विचलन र नैतिक अपचलनमा सबै माओवादी नेताकार्यकर्ता मुछिएर तत्कालिन माओवादीले आफ्नो साख गिरायो । प्रचण्ड नुर गिराएर नै रहे । नेताहरुको जीवनशौली सरलिकृत गर्ने संकल्प पनि गरियो तर कार्यान्वयन भएन । थुप्रैपटक घोषणा गरेर पनि प्रचण्ड शैली परिवर्तन भएन । आज पनि प्रचण्ड शैली, उनको खर्च गराइ लवाइ खुवाइ, घुमाइ डुलाइ सबै निन्दा चर्चा र आर्थिक अपचलनकै कारण भनिन्छ ।
आयश्रोत र सम्पत्ति विवरणमा जे भनिएको छ जे देखिन्छ त्यो विश्लेषण गर्दा प्रचण्ड शैली अत्यन्तै महंगो र विलासी छ जुन उनको आर्थिक हैसियत भन्दा नितान्त बेगल छ त्यो आर्थिक हैसियतले प्रचण्ड जीवन शैलीलाइ छुन त के कल्पना गर्न समेत भ्याउँदैन । पत्नी सीता सधैं रोगी, सँधै महंगो उपचार गर्नुपर्ने, देश विदेश गरिरहनुपर्ने, छोरी–बुहारी सबै राजनीतिमा अहिले जे आम्दानी छ सबै सरकारी पद प्राप्त भएको कारण मात्रै हो । सँधैको लागि निश्चित आयश्रोत ब्यापार ब्यबसाय छैन । ब्यबसाय हुने कै पनि सँधै आय आर्जन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यस्तो बेला प्रचण्ड परिवारको आयस्ता र जीवन शैली बिच कुनै पनि तालमेल मिल्न सक्दैन । कुन अर्थशास्त्री र ब्यबस्थापकले त्यस्तो चमत्कारिक ब्यबस्थापन गर्न सक्छ जसको आय र ब्ययमा हजारौं कोषको भिन्नता छ ? आय भन्दा ब्यय हजारौं गुणा फरक हुँदा पनि जिन्दगी सानदार ढंगले चल्छ ? गुप्त धन र रहस्य बिना यो सम्भव हुन्न कुनैपनी हालतमा ? गरिब देशका गरिब मध्य कै एक प्रचण्डको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पक्कै पनि चामत्कारिक यस कारण छ कि उनको तीन तोला सुन र एक कठ्ठा जमिन सधैं उस्तै छ ।
कहिल्यै कसैगरि पनि नसकिने ‘विद्या धनंं सर्व धनं प्रधान नं’ भने झै छ प्रचण्ड सम्पत्ति जति खर्च गरे पनि नमासिने नसकिने । त्यही आय र आफ्नो संसद्को आयले प्रचण्ड परिवार विलासी जिन्दगी जिउन सक्छ । युरोप अमेरिकी धनी ब्यापारीहरुको भन्दा विलासी जीवन कसरी सम्भव हुन्छ प्रचण्ड सुत्र र मितव्ययीता जनता जान्न चाहन्छन । मीत ब्ययिताको उदाहरण र नमूना प्रचण्ड शैली र सम्पत्ति जनताको जान्ने हक भित्र पर्छ पर्दैन ? हामीले कस्तो जादुयी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं जसमा जनता ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने अनि नेताहरू तीनतोला सुन र एक कठ्ठा जग्गा भएकै भरमा संसार भ्रमण, उपचार एसआरामको जिन्दगी बाँच्न सक्ने ? अनि किन लागोस हेगको डर ? अरु हेग पुग्नपर्छ भनेर डराउँछ्न । हेग पुगेर प्रमाण पुग्नेहरु युद्ध अपराधी र मानव अधिकार उलंघनको अपराधमा जेल पर्छन । प्रचण्ड ‘हिरो हुन्छु’ भन्नु हुन्छ आखिर के छ प्रचण्डसँग त्यो चमत्कारीक खुवी ? जसले निहत्था नागरिकलाई क्रान्तिको नाममा कत्लेआम गर्दा पनि पुरुषार्थ ठान्दै पुरस्कार दिनेगर्छ ।
हिरो ठान्दै आकर्षण गर्छ ? किन चुक्यो नोवेल पुरस्कार प्रचण्डको हातमा पर्न ? गौतम बुद्ध समेत प्रायश्चित गर्दै आफुले रोजेको मार्ग र देखाएको मानवतावादी दृष्टिकोण गलत भन्दै प्रचण्डपथ अर्थात हत्या हिंसाको माध्यमबाट मुक्ति छिटो र सम्भव भनेर रुन आइपुग्लान शायद ?
कमरेड प्रचण्ड लगायत सम्पुर्ण नेतागण, म सामान्य नागरिक एक अर्थमा बबुरो प्राणी आजसम्म तपाईंले नमार्नु भएको कारण मात्रै जिवित छु । राज्य दोहन गरेर तपाईंहरुले लिनु भएको सेवा सुबिधामा र्‍याल काढेर बोलेको हैन । गणतन्त्रमा मेरो उपस्तिथि र हाजिरले सत्तासिनहरुको शरीर त के छाया छुने समेत औकात र ल्याकत राख्दैन तर यति बोल्न र लेख्न भने सक्छु र भन्छु यो आम गरिब नेपालीको भावना हो । भावना यही भएका तर बोल्न नजान्नेहरुको बोलीमा प्राण हालेर बोल्दैछु ।
खासमा म कोही होइन तर जन्मदा भोटो लगाउँदा देखि मर्दा कात्रो किन्दा पनि कर तिर्ने एक आम नेपाली हुँ । बिपत्ति र गरिबी अनि कर्मले थातथलो खोसिएका नेपालीहरुको लवज हो, निन्दा हो, भत्सर्ना हो ,चेतावनी हो । श्राप हो । हामीलाई पनि थाहा छ तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको सेवा सुबिधा र सहुलियतमा गरिबको रंगविहीन पसिनाको बुद मिसिएको छ । रोगी निमुखाको रगत परेको छ । चिसो चुल्हो बाल्न खाडी भासिएका झन्डै साठीलाख नेपालीको आँसु लतपतिएको छ । रोदन चिच्याएको छ । दैनिक लास बनेर रातो काठको बाकसमा भित्रने युवाहरूको अनमोल जोवन छ । बिबिध परिस्थिति र परिबन्दको चंगुलमा फसेर नारकिय जेल जीवन बिताउने नेपालीहरुको आत्माको क्रन्दन छ । विदेशी भूमिमा बलात्कृत चेलीको योनीरस आलो रगतको आहाल छ । बाढीपहिरो, भुकम्पले उठीवास लगाएकाहरुको दारुण कथा र असंख्य सुस्केरा छ । लाज नै बेचेर लाजको वस्त्र कतिन्जेल लगाउनु हुन्छ नेताज्यू ? तपाईंले खाने प्रत्येक गाँसमा माथि उल्लेखित कुराहरू दुःख पीडा, दर्द र कहानीहरु छन । जनताको सेवा सुबिधा भन्दा पर गएर आफ्नै, आफ्नाको मात्रै हित सोच्नुभयो भने दैवी न्यायको लागि मान्छेहरुले भगवान पुकार्न बाध्य हुन्छन् । मान्छेले बनाएको कानुनले पाता कस्न सकेन भने भगवानले बनाएको कानुनले एकदिन जरुर सजाय दिनेछ यही लोकमा यही सबैले देख्नेगरि दन्डीत हुनुपर्नेछ ख्याल गर्नुहोला ।